Jadwalka ay ku ciyaareyso kooxda qurbo joogta ah ee Som United oo lasoo saaray – Gool FM
(Soomaaliya) 20 Dis 2018. Waxaa shaaca laga qaaday jadwalka kooxda qurbo joogta Som United ay kula ciyaari doonto kooxaha dalka kulamo saaxiibtinimo.
Kooxda kubadda cagta Som United waxey ka ciyaarta horyaalka afaraad ee dalka Sweden, iyado kamid ah kooxaha ugu awood sareysa marka loo eego horyaalka afaraad ee dalka Sweden.
Maalintii Talaadada oo ay taariikhda ku beegneyd 18-12-2018 ayay soo caga dhigteyn caasimada magaalada muqdisho iyago si heer saro ah loo soo dhabeeyay, waxaana soo dhaweynta xidigahan ka qeyb galay wasiirka wasaarada dhalinyarada iyo isportiga marwo khadiijo maxamed diiriye, maamulka gobolka banaadir iyo xiriirka kubadda cagta soomaaliyed.
Ma ahan kooxdii ugu horeysay ee qurbo jog timaado caasimada magaalada muqdisho hore waxaa u yimid kooxda jaaliyada magaalada Melbourne dalka austaria oo timid labo mar iyo xidigo laga soo aruuriyay wadamada England Norway, mareykanka iyo Sweden.
Kooxda Som United kulankooda ugu horeya waxey la qaadan doonan naadiga muqdisho United marka ay taariikda ku began tahay 21-bisha oo ay tahay maalinta barito ee jimcaha.
Kulankooda labaad waxey ciyaari doonan 24-bishan oo ay ku began tahay maalinta isniinta waxey la dheeli doonan nadiga Madbacada qaranka.
Maalin kadib waxey kulankooda 3-aad la bashaali doonan naadiga L-L-P-P- Jeenyo taa oo kamid ah kooxaha ugu tunka weyn horyaalka dalkeen soomaaliya kulankan ayaa dhici doona 26-bishan oo ay ku aadan tahay maalinta arabada.
Safarka kulamada saaxiibtinimo kooxda Som United waxaa soo afjari doonta kooxda Muqdisho City fc ex banadir Sports club taariikhda marka ay tahay 28-ka bishan oo ay ku began tahay maalinta jimcaha .
Tani waxey ka dhigan tahay in ay baaqi ku sii ahaan doonan mudo dhan 12-maalmood caasimada magaalada muqdisho kooxda Som United, iyago kulamo la qaadanaya kooxaha dalka.
30-bishan ayay ka amba bixi doonan magaalda muqdisho.
"Ruuxii Galaa Abaal Mar Baa loo Gudaa.".- Eric Bailly oo fariin qiiro leh u diray Macalinka la Ceyriyay ee Jose Mourinho